Rịba ama10 ji ọnụọgụ abụọ nke nchekwa na South Korea mee ka Note9 nwere | Gam akporosis
Samsung natara ihe karịrị nde 1,3 maka Galaxy Note 10, okpukpu abụọ ka ihe edeturu 9
El Galaxy Note 10 dị ka ọ na-enweta ọtụtụ nlebara anya ma enweelarịrị ihe karịrị nde nde atọ nke Samsung natara. Dị ọnụ ọgụgụ dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị maara na ọ na-eme ihe Galaxy Note 1,3 nwetara n'afọ gara aga.
Ọ na-adọta uche ọ bụghị naanị n'ihi na ya niile atụmatụ na na 3,5mm audio Jack nke ahụ apụla n'anya, mana Galaxy S10 abụrụla akwụkwọ ozi kacha mma maka iwebata ọtụtụ iji tụba onwe ha na nchekwa nke Nkọwa 10 +.
Ọtụtụ ewerela akụkọ a ka ha kwuru ọ bụ n'ihi na Galaxy Note 10 enweghị audiojack, ma ka anyị bụrụ eziokwu, ọ dị afọ abụọ kemgbe Galaxy S8 nke Samsung na-eme nke ọma.
Dị ka anyị na-ekwu, Galaxy S10 bụ onye dugara ụzọ site na otuto a na-anata ya, nke mere na ọ na-ejikwa dọrọ ndị na-agba iPhone n'ime agba ya. Yabụ anyị nwere 10 Galaxy Note na na South Korea anatala nde 1,3, nke na-eme ka ọnụ ọgụgụ e nwetara n’afọ gara aga okpukpu abụọ.
Anyị amaghị ọnụ ọgụgụ zuru oke, mana ndị mba ahụ bụ ndị bidoro imepụta anụ ọhịa aja a na-enye anyị ezigbo echiche banyere ihe ịga nke ọma nke ọdụ a na-enwe nke pụtara nanị oghere ya na ihuenyo ahụ, nhazi ka mma itinye obere ibu na obere oghere buru ibu karịa Nkọwa 9 na 256GB nke nchekwa dị n'ime gbakwunye 12GB RAM; na-echefughi mfucha nke audiojack tinyere ndozi ndị ọzọ na-ahapụ ekwentị nke aupa olee otu nnukwu ihuenyo ahụ dị.
Oge nke a Samsung amalitela ihe ngosi abụọ nke 10 iji gboo mkpa si dị iche iche ọrụ ma si otú mezue a karịa zuru okè afọ na na ga-ewetara gị ihe karịrị ịrịba ego. Anyi aghaghi ichefu nkwenye siri ike nke ulo oru a na aho n’aho n’abia n’iru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung natara ihe karịrị nde 1,3 maka Galaxy Note 10, okpukpu abụọ ka ihe edeturu 9
Ka anyị hụ, n'ime nde 1,3 ahụ, ole ka dị maka Nkọwa 10 na ole ka ha dị maka Nkọwa 10 Plus?
Ihe data ndị a adịghị ebe ahụ, mana ọ dị ka Nkọwa 10 + na-ebute ụzọ n'ụzọ ezi uche dị na ya.
Zaghachi Manuel Ramírez
Minecraft nowwa dị na beta maka gam akporo
Hazie Samsung Galaxy gị na isiokwu ịchọrọ ya na Otu UI na Hex Installer